Lehren wir die Allversö - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း > ကျနော်တို့ကတစ်လောကလုံးကိုကယျတငျတျောမူသင်ပေး?
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကလူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟူသောယူဆချက်သည် universalism ကိုသွန်သင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူသည်ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်၊ နောင်တရသည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယေရှုကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေငြင်းပယ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ဒါကြောင့်ငရဲဘုံဆိုတာမရှိဘူး။
Zum einen erfordert der Glaube an die Dreieinigkeit nicht, dass man an die Allversöhnung glaubt. Der berühmte Schweizer Theologe Karl Barth lehrte nicht den Universalismus und ebenso wenig die Theologen Thomas F. Torrance und James B. Torrance. In der Grace Communion International (WKG) lehren wir die Theologie der Dreieinigkeit, aber nicht die Allversöhnung. Auf unserer amerikanischen Internetseite steht dazu Folgendes: Allversöhnung ist die falsche Annahme, die behauptet, dass am Ende der Welt alle Seelen menschlicher, engelhafter und dämonischer Natur durch die Gnade Gottes errettet werden. Manche Universalisten gehen sogar soweit, dass sie der Meinung sind, dass Reue gegenüber Gott und der Glaube an Jesus Christus nicht notwendig seien. Universalisten verneinen die Doktrin der Dreieinigkeit und viele Menschen, die an die Allversöhnung glauben, sind Unitarier.
ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည် died ၀ ံဂေလိတရားကိုသူတို့မသေမှီတိုင်အောင်မယုံကြည်သူများအတွက်ကြင်နာစွာ၊ သို့တိုင်ဘုရားသခင်အားမိမိတို့ရွေးချယ်သောကြောင့်ငြင်းပယ်သူများမကယ်တင်နိုင်ပါ။ ကျမ်းစာလေ့လာမှုကိုစိတ် ၀ င်စားသောကျမ်းစာဖတ်ရှုသူများကလူတိုင်းနောင်တရပြီးဘုရားသခင့်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မငြင်းနိုင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သို့သော်လည်း၊ ကျမ်းချက်များသည်အပြီးသတ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ယူသန်ဆန်ခြင်းမရှိပါ။
အဘယ်ကြောင့်လူသားအားလုံးကယ်တင်ခံရနိုင်မှုသည်အယူမှားဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားများနှင့်စွပ်စွဲမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသင့်သနည်း။ အစောပိုင်းချာ့ချ်၏အယူဝါဒပင်ငရဲကိုယုံကြည်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ယူသန်ဆန်သောအယူအဆမရှိကြချေ။ သမ္မာကျမ်းစာဥပစာစကားများသည်မီးတောက်များ၊ အလွန်မှောင်မိုက်ခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်လူတစ် ဦး သည်ထာဝရဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကင်းကွာနေပြီးကမ္ဘာကြီးတွင်နေထိုင်သောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မိမိသည်မိမိ၏အတ္တစိတ်၏လိုအင်ဆန္ဒများကိုမိမိကိုယ်ကိုပေးသည်၊ ချစ်ခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ငြင်းဆန်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤဥပစာစကားများကိုစာသားအတိုင်းယူလျှင်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်ဥပစာစကားများကိုစာသားအတိုင်းမယူသင့်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုရန်သာရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်ငရဲသည်၎င်းတည်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မတည်သည်ဖြစ်စေနေရာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ လူအားလုံးသို့မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်အားထက်သန်သောဆန္ဒရှိရန်နှင့်ငရဲ၏ဝဒေနာကိုမည်သူမျှမခံရသင့်ကြောင်းလူတစ် ဦး အားအယူမှားသူအဖြစ်မယူမှတ်ပါ။
သို့တိုင်လူအားလုံးသည်ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်ကိုလက်ခံကြမည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကမအာမခံပါ။ သူမကပင်လူအချို့ကဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောကယ်တင်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုအလွန်သတိပေးသည်။ သို့သော်မည်သူမဆိုထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်ဟုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ဘုရားသခင်နှင့်ချစ်ခင်သောဆက်ဆံရေးရှိရန်မည်သူမဆိုကမ်းလှမ်းခြင်းကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ ပင်တွေး။ မရ။ CS Lewis က The Great Divorce စာအုပ်တွင်ဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည် -“ အပြစ်စီရင်ခံရသူများသည်အောင်မြင်သောသူပုန်များဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ ငရဲတံခါးအတွင်းပိုင်းကနေသော့ခတ်ထားတယ်။ "
Universal သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်မှုများ၏တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာသို့မဟုတ်စကြဝicာအတိုင်းအတာအရနားလည်မှုလွဲခြင်းမပြုသင့်ပါ။ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သောယေရှုခရစ်အားဖြင့်လူသားအားလုံးကိုရွေးချယ်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ထံမှဤဆုလက်ဆောင်ကိုနောက်ဆုံးတွင်လက်ခံလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအတွက်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
Der Apostel Petrus schreibt hierzu: «Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Busse finde» (2. ဓာတ်ဆီ 3,9). Gott hat alles für ihn mögliche getan, um uns von den Qualen der Hölle zu befreien.
သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငြင်းပယ်။ သူနှင့်ဝေးကွာသွားသောသူတို့၏ရွေးချယ်မှုကိုမချိုးဖောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏အတွေးများ၊ အလိုတော်နှင့်နှလုံးသားများကိုလျစ်လျူရှုရန်သူသည်သူတို့၏လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သူသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကဘုရားသခင်၏အဖိုးထိုက်ဆုံးကျေးဇူးတော်ဆုကျေးဇူးကိုယေရှုခရစ်၌ခံယူမည့်သူမရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်လူသားများကို ဖန်တီး၍ သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အောင်ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သို့မှသာသူတို့သည်သူနှင့်စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Die Bibel verwischt den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen nicht und wir sollten es auch nicht tun. Wenn wir sagen, dass allen Menschen vergeben wurde, sie durch Christus errettet wurden und mit Gott versöhnt sind, bedeutet dies, dass während wir alle zu Christus gehören, stehen noch nicht alle in einer Beziehung mit ihm. Während Gott alle Menschen mit sich versöhnt hat, haben noch nicht alle Menschen diese Versöhnung angenommen. Deshalb sagte der Apostel Paulus «Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!” (2. ကောရိန္သု 5,19-20). Aus diesem Grund verurteilen wir Menschen nicht, sondern teilen ihnen mit, dass die Versöhnung mit Gott durch Christus vollendet wurde und als Angebot für jeden bereit steht.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဝန်းကျင်တွင်ဘုရားသခင်၏အတွေးအခေါ်များနှင့်လူသားတို့ကိုသူ၏သနားခြင်းကရုဏာအကြောင်းကျမ်းစာအမှန်တရားများကိုပေးပို့သောကြောင့်ရှင်သန်နေသောသက်သေခံချက်ဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုအားလုံးကိုသင်ကြားပေးပြီးလူအားလုံးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကလူသားအားလုံးနောင်တယူပြီးသူ့အပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုလက်ခံဖို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တောင့်တတာကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောသပ်သည် Tkach အားဖွငျ့ဖွစျသညျ